အောက်တိုဘာလ 1 ရက်၊ 2020
ဤကွတ်ကီးမူဝါဒတွင် မှတ်ပုံတင်လိပ်စာ No.168 Jinghai East Rd., Chang'an, Dongguan, Guangdong, China ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ထားသော vivo Mobile Communication Co., Ltd. (ဤနေရာမှစ၍ "vivo"၊ "ကျွန်ုပ်တို့" သို့မဟုတ် "ကျွနု်ပ်တို့ကို" ဟုရည်ညွန်းပါမည်) ပိုင်ဆိုင်သော သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်သော ဝဘ်ဆိုက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး အသုံးပြုနိုင်သော အမျိုးမျိုးသော ကွတ်ကီးအမျိုးအစားများကို ဖော်ပြထားသည်။ ဤမူဝါဒတွင် သင်က ကွတ်ကီးများကို မည်သို့စီမံနိုင်ပုံကိုလည်း ဖော်ပြသည်။
1. ကွတ်ကီးဆိုတာ ဘာလဲ။
ကွတ်ကီးဆိုသည်မှာ ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုကို သင်ဝင်ကြည့်ချိန်တွင် သင့်ကွန်ပျူတာ သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းစက်ပေါ်တွင် ထိုဝဘ်ဆိုက်ကသိမ်းဆည်းလိုက်သော စာသားဖိုင်ငယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကွတ်ကီးများကြောင့် သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်ကို သင့်စိတ်ကြိုက်ပုံစံဖြင့် သုံးနိုင်ခြင်း၊ သင့်သတ်မှတ်ချက်များကို အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ မှတ်ထားနိုင်ခြင်းနှင့် ကြော်ငြာများနှင့် ဝဘ်ရှာဖွေမှုများ ပိုမိုထိရောက်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့ကိုအထောက်အကူပေးနိုင်ခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ vivo ၏ ဝဘ်ဆိုက်များကို သင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည့်အခါတိုင်း ကွတ်ကီးများကို သင် လက်ခံရန် သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ရန် သင့်ကို အချက်ပြပါမည်။ ကွတ်ကီးများသည် အသုံးပြုရန် သတ်မှတ်ထားသော စက်နှင့် သက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်းသည်။ သို့သော် သင့်အထောက်အထားကို ကျွန်ုပ်တို့က ချက်ချင်းသိရှိနိုင်သည့် အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ပါ။
ကွတ်ကီးပါ အကြောင်းအရာကို ကွတ်ကီးများကိုဖန်တီးသည့် ဆာဗာကသာ ရယူဖတ်ရှုနိုင်ကြောင်း သတိပြုပါ။
2. ကွတ်ကီးများ- အမျိုးအစားများ၊ ကဏ္ဍများနှင့် အသုံးပြုရသည့် ရည်ရွယ်ချက်များ
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကွတ်ကီးများကို အောက်ပါအတိုင်း နှစ်မျိုးခွဲခြားထားသည်-
a) မူလ ကွတ်ကီးများ
မူလ ကွတ်ကီးများ ဆိုသည်မှာ ကုမ္ပဏီတွင်းနှင့် ("တသမတ်တည်းရှိသော ကွတ်ကီးများ" ဟုလည်း ခေါ်သည့်) တိုက်ရိုက်ကွတ်ကီးများကို ရည်ညွှန်းပြီး ဝဘ်ဆိုက်များ သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိ ဝန်ဆောင်မှုများ အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်နိုင်စေရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် အရာများဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဝဘ်ဆိုက်မှ သင်ထွက်ခွာပါက ဘာသာစကားသတ်မှတ်ချက်နှင့် သင်ပိုမိုနှစ်သက်သော ဆိုင်ကဲ့သို့ သင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုလည်း မှတ်မိနိုင်စေသည်။ ဤကွတ်ကီးများကို သင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည့် ဝဘ်ဆိုက်က သတ်မှတ်ပြီး ထိုဝဘ်ဆိုက်ကသာ ၎င်းတို့ကို ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
b) ပြင်ပ ကွတ်ကီးများ
ပြင်ပ ကွတ်ကီးများသည် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများထံမှ ခြေရာခံကွတ်ကီးများ သို့မဟုတ် ပြန်လည်ပစ်မှတ်ထားသည့် ကွတ်ကီးများဖြစ်သောကြောင့် သွယ်ဝိုက်ကွတ်ကီးများဖြစ်သည်၊ ၎င်းတို့ကို များသောအားဖြင့် ကြော်ငြာများအတွက် သို့မဟုတ် ဝဘ်သုံးစွဲသည့်အပြုအမူဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို စုဆောင်းရန်အတွက် ရည်ရွယ်သည်။ vivo ၏ ဝဘ်ဆိုက်သည် ထိုကဲ့သို့သော ပြင်ပဝန်ဆောင်မှုများကို သုံးကောင်း သုံးနိုင်သည်။ ဥပမာ ကျွန်ုပ်တို့၏ စာမျက်နှာအချို့သည် YouTube၊ Google နှင့် Twitter ကဲ့သို့ ပြင်ပဝန်ဆောင်မှုပေးသူများထံမှ အကြောင်းအရာများကို ပြသသည်။
2.2 ကဏ္ဍများနှင့် အသုံးပြုရသည့် ရည်ရွယ်ချက်များ
ကွတ်ကီးများကို ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးပေါ် အခြေခံ၍ ကဏ္ဍလေးမျိုး ခွဲခြားနိုင်သည်-
a) အထူးလိုအပ်သော ကွတ်ကီးများ
၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်နှင့် အခြားဝန်ဆောင်မှု ကမ်းလှမ်းချက်များ၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာအတွက် လိုအပ်သော ကွတ်ကီးများ ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့တွင် ဥပမာ- ကျွန်ု်ပ်တို့ ဝဘ်ဆိုက်၏ လုံခြုံစိတ်ချရသော နေရာများသို့ သင် ဝင်ရောက်ခွင့် ရနိုင်စေသော ကွတ်ကီးများ ပါဝင်သည်၊ ထိုကွတ်ကီးများ မရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ကို ဈေးဝယ်ခြင်းတောင်းနှင့် ဝဘ်ဆိုက်အချက်အလက်များ ပြသခြင်းကဲ့သို့ ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးအပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
b) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ကွတ်ကီးများ
သင်က ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်သို့ ပြန်လာသည့်အခါ သို့မဟုတ် အခြားဝန်ဆောင်မှုကမ်းလှမ်းချက်များသို့ ဝင်ရောက်သည့်အခါ သင့်ကို မှတ်မိစေရန် ဤကွတ်ကီးများအား အသုံးပြုသည်။ ဥပမာ- သင်၏ ဒေသနှင့်ကိုက်ညီသော ဘာသာစကားသုံးဝဘ်ဆိုက်ကို သင့်အားပြနိုင်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ ပထဝီတည်နေရာကို ကွတ်ကီးအတွင်း သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။ သို့မှသာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အကြောင်းအရာများကို သင့်အတွက် သီးသန့်ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သင့်ကို အမည်တပ်နှုတ်ဆက်နိုင်ပြီး သင့်သတ်မှတ်ချက်များကို မှတ်မိနိုင်သည်။
c) လေ့လာဆန်းစစ်မှု/စွမ်းဆောင်မှုဆိုင်ရာ ကွတ်ကီးများ
ွှဤကွတ်ကီးများအရ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင် အကြည့်များဆုံး စာမျက်နှာများကို ပြသခြင်းကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်နှင့် အခြား ဝန်ဆောင်မှုကမ်းလှမ်းချက်များမှတစ်ဆင့် ဧည့်သည်များကို သိရှိနိုင်ပြီး ဧည့်သည်အရေအတွက်ကို ရေတွက်နိုင်သည်၊ သို့မှသာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်နှင့် အခြားဝန်ဆောင်မှုကမ်းလှမ်းချက်များ အလုပ်လုပ်သည့်ပုံစံကို ကျွန်ုပ်တို့က ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင်၏ စွမ်းဆောင်ရည်အား သိရှိနားလည်ရန်နှင့် သင့်ကို ပိုမိုသီးသန့်ဆန်သော မားကက်တင်းကြော်ငြာ ကမ်းလှမ်းနိုင်ရန်အတွက် ဤကွတ်ကီးများကို Google Analytics ကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့၏ မိတ်ဖက်များကလည်း အသုံးပြုသည်။ ဤကွတ်ကီးများသည် သင့်ကို မည်သူမည်ဝါဟု ဖော်ပြသော အချက်အလက်များကို မစုဆောင်းပါ။ ဤကွတ်ကီးများ စုဆောင်းသော အချက်အလက်အားလုံးကို စုပေါင်းထားသောကြောင့် အမှတ်သညာမဖော်ပြပါ။
d) ပစ်မှတ်ထားသော ကွတ်ကီးများ
ဤကွတ်ကီးများက ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်နှင့် အခြားဝန်ဆောင်မှု ကမ်းလှမ်းချက်များသို့ သင်၏ဝင်ကြည့်မှု၊ သင်ဝင်ကြည့်သည့် စာမျက်နှာများနှင့် သင်လိုက်ကြည့်သည့် လင့်ခ်များကို မှတ်သားထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်၊ အခြားဝန်ဆောင်မှု ကမ်းလှမ်းချက်များနှင့် ၎င်းတို့တွင် ပြသသော ကြော်ငြာများ (ရှိခဲ့ပါက) ကို သင့်စိတ်ပါဝင်စားမှုများနှင့် ပိုမိုကိုက်ညီစေရန်အတွက် ဤအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က သုံးပါမည်။ အဆိုပါရည်ရွယ်ချက်အတွက် ပြင်ပအဖွဲ့များနှင့်လည်း ဤအချက်အလက်များကို မျှဝေနိုင်သည်။
e) အခြား ကွတ်ကီးများ
ဤကွတ်ကီးများသည် ပြင်ပအဖွဲ့များမှဖြစ်ပြီး မရှိမဖြစ် မဟုတ်ပါ။
3. ကွတ်ကီးများကို စီမံခြင်း - ဘရောက်ဇာဆက်တင်များ
ဘရောက်ဇာ အများစုသည် ကွတ်ကီးများကို အလိုအလျောက် လက်ခံသည်။ သို့သော် ခေတ်သစ်ဘရောက်ဇာအများစုတွင် သင်၏ သတ်မှတ်ချက်များ (ကွတ်ကီးများကို ဖျက်ခြင်း၊ ပိတ်ခြင်း၊ ခွင့်ပြုခြင်းဆိုင်ရာ ဆက်တင်များ) အလိုက် ကွတ်ကီးများကို စီမံခွင့် ရှိသည်။
အောက်တွင် အသုံးများသော ဘရောက်ဇာများရှိ ကွတ်ကီးများစီမံခြင်းဆိုင်ရာ နောက်ထပ်အချက်အလက်များကို တွေ့ရပါမည်-
• လင့်ခ်- "Google Chrome"
• လင့်ခ်- "Internet Explorer"
• လင့်ခ်- "Firefox"
• လင့်ခ်- "Microsoft Edge"
• လင့်ခ်- "Apple Safari"
သင်သည် ကွတ်ကီးများကို အချိန်မရွေး ပိတ်နိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့ကိုပိတ်ခြင်းဖြင့် ဝဘ်ဆိုက်များ၏ အချို့သော အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြု၍မရဘဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။